Wararkii ugu dambeeyay Xiisada Guriceel iyo Ahlu Sunna oo xoojisay difaaca hore ee…. | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Wararkii ugu dambeeyay Xiisada Guriceel iyo Ahlu Sunna oo xoojisay difaaca hore...
Wararkii ugu dambeeyay Xiisada Guriceel iyo Ahlu Sunna oo xoojisay difaaca hore ee….
Guriceel (Halqaran.com) – Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe oo dareensan in col kaga soo wajahan yahay Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa Galmudug ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa waddo qorshaheedii ugu dambeeyay, ee ay ku doonayso inay ku difaacato gacan ku haynta Magaalada Guriceel.
Axmed Macalin Fiqi, Wasiirkii Amniga Galmudug, ayaa Khamiistii sheegay in istiqaaladiisa uu u gudbiyay Madaxweynaha Galmudug, ka dib markii uu sheegay inay isku fahmi waayeen in wada hadal lagu xaliyo xiisadda maamulka kala dhaxeysa Hoggaanka Ahlu Sunna.
Si kastaba, haddii aan laga baaqsan dagaalkan waxa uu galaafan doonnaa nolosha dad badan, waana xilli Shabaabkii Gobolada Dhexe ku sugnaa ay weli haystaan deegaanadii ay horey uga qabsadeen Galmudug.
Xiisada magaalada Guriceel